”Ma jiro xad u dhexeeya Shiinaha & Taiwan!” – Shiinaha oo galaa baxaya hawada Taiwan, iyo isagoo ku hanjabey inaanay u habran doonin. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home News ”Ma jiro xad u dhexeeya Shiinaha & Taiwan!” – Shiinaha oo galaa...
”Ma jiro xad u dhexeeya Shiinaha & Taiwan!” – Shiinaha oo galaa baxaya hawada Taiwan, iyo isagoo ku hanjabey inaanay u habran doonin.
Walwaal Online; (Beijing) 22 Sebt 2020 – MW Taiwan ayaa Beijing ku eedeeyey inay si kas ah u hurinayso xiisadda Bariga Aasiga, ka dib markii ay dayuuradaha Shiinuhu ay soo dhaafeen khadka xaasaasiga ah ee kala qaybiya marinka yar ee u dhexeeya Shiinaha iyo Taiwan oo is maamulaysey muddo 40 sanadood ah.
Dayuuradaha Shiinaha oo ka imanaya jihooyin kala duwan ayaa iskugu jira dayuurado casri ah oo ah kuwa guuxooda ka dheereeya iyo kuwa culus ee wax duqeeya, taasoo ah arrin aan ugub ah oo aan hore u dhicin.
Shiinaha ayaa tillaabadan qaaday ka dib markii ay halkaa tagtay Keith Krach, oo ah Wasiir Xigeenka Tamarta, Dhaqaalaha iyo Arrimaha Degaanka ee Maraykanka oo caasimadda Taipei kulan kula qaadatay madaxda Taiwan, ka hor maamuus loo sameynayo MW hore ee Taiwan ee Lee Teng-hui.
Afhayeenka WAD Shiinaha, Wang Wenbin, ayaa isna warfidiyeenka ugu sheegay Beijing in sida uu yidhi “Taiwan ay tahay qayb aan laga goyn karin geyiga Shiinaha,” isagoo meeshaba ka saaray inuu jiro xad ama khad kala qaybiya gasiiraddan fallaagada ah iyo dhulwaynaha Shiinaha intiisa kale, kaasoo ah war aanay jeclaysan doonin Taiwan.
Previous article(Warbixin qoraal ah Iyo muuqaalo) Shan goobood ee dalxiiska dhulka Soomaalida ugu quruxda badan.
Next article“Nin Yuhuud ah ayaa sanad qarinayey adiguna ma hal maalin ayaad magangelin waydey?” – Qiso dhab ah oo qiime badan.